ခေါင်းကိုက်ခြင်းအပေါ် ROI ကဘာလဲ? | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 9, 2009 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Douglas Karr
၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများ၊ နည်းပညာရောင်းချခြင်းသည်လွယ်ကူသည်။ ရှုထောင့်များရှိသည်၊ နေရာယူနိုင်သည်၊ သတ်မှတ်ထားသောအင်္ဂါရပ်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များရှိသည်။ ပြproblemနာကလူအများစုကနည်းပညာမ ၀ ယ်ကြဘူး။
ကြီးစွာသောအရောင်းအဖွဲ့အစည်းကိုအချိန်အလုံအလောက်ပေးပါ အဆိုပြုချက်ကိုတောင်းဆိုသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အနိုင်ရပြီးအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အဓိကပြိုင်ဆိုင်မှု (ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာများထင်မြင်ချက်အရ - ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ) open source ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သောကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စျေးကြီးတဲ့ software ကိုရောင်းလိုက်ရင်ကျွန်ုပ်တို့မှာဖောက်သည် ၃၀၀ ထက်ပိုလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါတို့တကယ်မဟုတ်တာပါ software ရောင်းချခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်များကိုရောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာများကကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၏တန်ဖိုးမှာရလဒ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည် ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး လမ်းပေါ်မှာဆင်း။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိပါ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာ, ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး လုံခြုံရေးကိစ္စများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး တိုးချဲ့နိုင်မှုအတွက်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး အသုံးပြုသူများကိုပညာပေးခြင်း၌, ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုသုံးဖို့ခက်ခဲတယ် ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘူး ပျက်ကွက်မှုမှ။
ငါတို့တကယ့်ပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့ Tylenol ပါ။
အချို့သောအလားအလာများခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်း relish ... အဆင်ပြေပါတယ် ... ငါတို့သူတို့အဘို့ဤအရပ်၌မဟုတ်ပါဘူး။ ရလဒ်များကိုသာအာရုံစိုက်သောဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်လိုကြသည်။ အားဖြင့်သတ်မှတ်အဖြစ်ရလဒ်များ သူတို့ကို, မ us.
သင်၏ကုမ္ပဏီနည်းပညာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါတိုင်းမည်မျှပင်အေးဆေးပါစေ ၀ ယ်ယူသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ (စိတ်မကောင်းသောအင်ဂျင်နီယာများ!) မဟုတ်ပါ။ သင်၏ကုမ္ပဏီအမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ထုတ်ကုန်များ၏ရှေ့မှောက်နောက်ကွယ်ရှိလူများဖြစ်သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီသည်သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရောင်းသမားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သင်သိသောကုမ္ပဏီကိုစတင်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းရှင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်။ မင်းရဲ့ခေါင်းကိုက်နေတဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းတဲ့လူတွေကမင်းကုမ္ပဏီကလူတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။
Doug - ငါဂရုမစိုက်ဘူး ရွယ်။ သင်၏လျှောက်လွှာကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေမည်မျှရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ရောင်းအားကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး ငါနည်းပညာဂရုမစိုက်ပါဘူး မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီကိုငါပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိရင်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုသင်အဲဒီမှာရောက်နေလို့ပါ။ ဖုန်းကိုဆက်ပြီးဆက်ပြောပါ၊ ဖုန်းပြန်မပြောတော့ဘူး၊ ငါတတ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှာမယ်။
ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာသည်မည်မျှအေးခဲသည်ကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါ မပေးနိုင် အသစ်ပြန်လည်လက်မှတ်ထိုးရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ သင်၏ဖောက်သည်များသည်အောင်မြင်မှုရလိုကြသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင့်အားပေးမည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။ သငျသညျပိုကောင်းနားထောင်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ခံရလိမ့်မည်။ ပိုကောင်းတာတောင်မှသင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသင့်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဆော့ဝဲလ်အတွင်းမှပင်ကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်ဖိုရမ်တစ်ခု၏နောက်ကွယ်တွင်သိုဝှက်။ မရနိုင်ကြောင်းသိထားကြသည်။ SaaS ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့အောင်မြင်ခဲ့သောဖြေရှင်းချက်ကိုအပြည့်အဝမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောအရာများကိုနားလည်သောအရည်အချင်းရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများလိုအပ်သည်။
ဤခေါင်းဆောင်များသည်အနည်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုနားလည်သည်။ ဖောက်သည်များအားမည်သို့ဖတ်ရမည်၊ ကြီးထွားရန်အလားအလာရှိမရှိ၊ ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များသိမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့အများစုမှာဖောက်သည်များအားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ရမည်ကိုနားလည်ကြသည်။ ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုလျစ်လျူရှုသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဟန့်တားရန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များမရှိသေးသောအခါမိုက်ခရိုစီမံခန့်ခွဲမှုသည်မိုက်မဲသောစီမံခန့်ခွဲမှုပန်းတိုင်များမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်ယုံကြည်သောသူများကိုငှားရမ်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီကိုယ်စားဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအားထိရောက်စွာ (နှင့်အမြတ်အစွန်း) အစေခံရန်အတားအဆီးအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်များကိုအောင်မြင်မှုပေးနေပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုပေးနေတာလား ခေါင်းကိုက်ခြင်း?